Jụọ Ugbu a Nyochaa - Nyocha ọgụgụ isi n'ịntanetị
Chọpụta bụ netwọkụ na-ahụ maka mmụọ na-emenye ụjọ ma jiri ụfọdụ ndị ọkachamara ọgụgụ isi na tarot kacha mma na mba ahụ. Jụọ Ugbu a bụ naanị netwọkụ anyị nyochara nke na-enyekwa ọgụgụ na Spanish yana Bekee. Ha kwenyesiri ike na ị ga-enwe afọ ojuju na ọgụgụ isi uche gị na ha na-enye onyinye ego 100%. Ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju kpọtụrụ ndị otu na-akwado ndị ahịa ha, ha ga-akwụghachi ego gị, ajụghị ajụjụ ọ bụla. M na-eji Chọpụta ugboro ugboro maka ndụmọdụ, achọpụtara m na ọnụahịa ha kachasị mma na nke kachasị mma.
Chọpụta anọwo na azụmaahịa ruo ọtụtụ afọ ma bụrụ otu n'ime ọrụ Psychic mbụ ịmalite ịnye ọrụ na ntanetị. Ugbu a enwere ha ma rụọ ọrụ na Florida ka ị nwee ike ijide n'aka na ị na-enweta ụlọ ọrụ ị nwere ike ịtụkwasị obi, ọ bụghị ụfọdụ ụlọ ọrụ esenidụt. Ahịa afọ ojuju dị elu ma ha emelitere usoro ha n'oge na-adịbeghị anya ka ị nwee ike ịgwa onye ndụmọdụ ịchọrọ, ọbụlagodi na ha adịghị ozugbo. Enter tinye nọmba ekwentị gị ma sistemu ahụ ga-akpọghachi gị ozugbo ha dị. Ha na-enye ọtụtụ obere elele na ọrụ mmụọ ndị ọzọ anaghị amasị horoscopes n'efu, yana ịgụ nkata n'ịntanetị.
ChọpụtaUsoro nyocha maka psychics bụ ihe dị egwu. Ihe dịka 1 n’ime 10 psychics na-emetụta bụ ndị akwụ ụgwọ. A na-enye ndị ọkà mmụta sayensị ọhụrụ metụtara ihe ọtụtụ ajụjụ ọnụ ma emesịa ha nwalee ikike ọgụgụ isi ha. A na-agba ndị ọkachamara ume ka ndị ahịa nwee obi ụtọ, ma ọ bụrụ na ha enweta ọtụtụ mkpesa Chọpụta agaghị ekwe ka ha nye ọgụgụ.
na nso nso Chọpụta emelitere weebụsaịtị ha ma m ga-ekwu na ọ dị mma karịa ka ọ dịbu. Ha gbakwunyere ihe ohuru akpọrọ "kpọghachi azụ" nke masịrị m. Ka anyị kwuo na ọkacha mmasị gị psychic dị n'ịntanetị mana ọ dịghị. Nwere ike itinye nọmba ekwentị gị na mmụọ ga-akpọ gị na akpaghị aka ozugbo ha dị. O doro anya na a na-eche maka uche gị kachasị amasị gị. Ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ ahụ dị mfe iji, ngwa ngwa ma na-enyere gị aka ịchọta ezigbo mmụọ.
Chọpụta nwere nnukwu ihe maka ndị ahịa ọhụụ. Nweta minit 15 maka naanị $ 10. Ha na-enye agụ ọgụgụ email n'efu na weebụsaịtị, ọ bụ ezie na ọ na-ewe ụbọchị ole na ole iji nweta nzaghachi ọ bụ mmetụ dị mma. Ekwadoro m ịdebanye aha maka akwụkwọ akụkọ ha kwa izu maka Kupọns na ụfọdụ akwụkwọ ndị na-enye ọhụụ.
Chọpụta'S ahịa ọrụ otu dị ukwuu. Ha nwere nkwa ịkwụghachi ego yabụ ọ bụrụ na afọ juru gị, inwere ike ịrịọ nkwụghachi. Ha anaghị enye akara ekwentị ndị ahịa na-akụda mmụọ, mana ndị na-akwado email ha zara nsogbu m naanị n'ime nkeji ole na ole, ha na-enwe ike idozi nsogbu m ngwa ngwa.